သတင်း - ၂၂ ကြိမ်မြောက် China Shunde (Lunjiao) International Woodworking Machinery Fair တွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်။
22 ကြိမ်မြောက် China Shunde (Lunjiao) International Woodworking Machinery Fair တွင် သင့်အား စောင့်မျှော်နေပါသည်။
22 ကြိမ်မြောက် China Shunde (Lunjiao) International Woodworking Machinery Fair ကို 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 10 ရက်နေ့မှ 13 ရက်နေ့အထိ Lunjiao Exhibition Hall, Shunde District, Foshan City တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Lunjiao ကို "တရုတ်နိုင်ငံမှ သစ်သားလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားမြို့" ဟုခေါ်သည် ။
China Shunde (Lunjiao) International Woodworking Machinery Fair ကို 1998 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလတိုင်း Shunde Lunjiao တွင် ကျင်းပပါသည်။ပြပွဲသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံး သစ်သားလုပ်ငန်း ပြပွဲများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် နိုင်ငံတကာတွင် သြဇာကြီးသော သစ်သားလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများ ရောင်းဝယ်ရေး ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ကဏ္ဍတစ်ခုစီတိုင်းသည် သစ်သားလုပ်ငန်းစက်လုပ်ငန်း၏ ဤပွဲတော်ကြီးတွင် ပါဝင်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ VIP သောင်းနှင့်ချီသော VIP များကို ဆွဲဆောင်ပါသည်။
1. သစ်သားစက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ စက်မှုကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည့် စက်မှုကွင်းဆက်၏ အသစ်ထည့်သွင်းထားသော ပံ့ပိုးပေးသည့်ကဏ္ဍများ၊
ဤပြပွဲ၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် စတုရန်းမီတာ 30,000 ရှိပြီး ပြပွဲတွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း 500 ကျော် ပါဝင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ပြပွဲ၏အကြောင်းအရာအရ ၎င်းကို စက်ယန္တရားဧရိယာ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းဧရိယာနှင့် စက်မှုကွင်းဆက်ပံ့ပိုးပေးသည့်နေရာဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။မူလပြသထားသည့် အသိဉာဏ်ရှိသော CNC သစ်သားလုပ်ငန်းစက်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ သစ်သားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၏ အရင်းအမြစ်များကို ပေါင်းစည်းရန်အတွက် စက်မှုကွင်းဆက်အသစ်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အားနည်းသောချိတ်ဆက်မှုများကို အပြည့်အဝတိုးတက်စေရန်နှင့် အလုံးစုံ အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။ စက်မှုကွင်းဆက်တွေးခေါ်မှုဖြင့် သစ်သားလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်း။
2. အသိဉာဏ်သစ်စက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထုတ်လုပ်မှုကို အာရုံစိုက်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်၏ ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးတွင် ကုမ္ပဏီများစွာကို စုစည်းကာ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် နည်းပညာများကို ပြသရန် အာရုံစိုက်ထားသည်။အသိဉာဏ်ရှိသော အလိုအလျောက် သစ်သားစက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ပြသရန် အာရုံစိုက်ပြီး ပရိဘောဂထုတ်လုပ်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုတန်ဖိုးကြီးသော အသိဉာဏ်ရှိသော စက်ကိရိယာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို ယူဆောင်လာစေရန် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ပြပွဲနေရာသို့ ရွှေ့ပါ။
1. သစ်သားစက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
1. အစိုင်အခဲ- သစ်သား- အလိုအလျောက် လက်ချောင်းအဆစ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ CNC လွှ၊ လေးဘက်ခြမ်း ပလာစတာ၊ လေးဘက်သတ် စက်ယန္တရား စင်တာ၊ tenon နှင့် groove စက်၊ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် ထုတ်လုပ်ရေး ကိရိယာများ၊ အထူးပုံသဏ္ဍာန် ထုတ်လုပ်ရေး ကိရိယာများ၊ အပူနှင့် အအေး စာနယ်ဇင်း၊ အသိဉာဏ် အစိုင်အခဲသစ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
2. ပန်းကန်အမျိုးအစား- ခြောက်မျက်နှာတူး၊ CNC ဖြတ်တောက်သည့်စက်၊ အီလက်ထရွန်းနစ် panel ကိုမြင်၊ အလိုအလျောက်အစွန်းကြိုးဝိုင်းစက်၊ အသိဉာဏ်ပန်းကန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
3. Coating sanding အမျိုးအစား- ပက်ဖြန်းကိရိယာများ၊ ဘေးထွက်ပရိုဖိုင်းဖုန်စုပ်စက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ သဲပြားရိုက်စက်၊ ပရိုဖိုင်သဲသဲထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
4. ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများ- ထိန်းချုပ်ဆော့ဖ်ဝဲစနစ်များ၊ မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၊ အထူးသီးသန့်မော်တာများ၊ ဟိုက်ဒရောလစ် ကိုက်ညီမှု၊ လမ်းညွန်သံလမ်းများ၊ ဆလင်ဒါများ၊ ဆိုလီနွိုက်အဆို့ရှင်များ၊ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စက်ဝိုင်းလွှဓါးများ၊ သဲမှုန့်များ၊ ရော်ဘာထုတ်ကုန်များ၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ
2. စက်မှုကွင်းဆက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
စက်ယန္တရားစင်တာ၊ ကွပ်စက်၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ CNC ကွေးခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စာရွက်သတ္တုခရမ်အပူပေးခြင်း၊ သွန်းလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အထွေထွေစာချုပ်၊ မှုတ်ဆေး၊ တစ်ပိုင်းကုန်ချောထုတ်ကုန် စသည်တို့။
Xinhua Industrial သည် ဤပြပွဲတွင် ပါဝင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သစ်သားလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာအမှတ်တံဆိပ် “Zweimentool” ကို ယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤပြပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ သစ်သားလုပ်ငန်းသုံး Spiral Cutter၊ သစ်သားလုပ်ငန်းအတွက် Carbide Indexable ဓားများ၊ spiral planer woodworking အတွက် Indexable carbide ဓားများ၊ Carbide woodworking planer blades များဖြစ်သည်။Edge banding machine blades များ၊သစ်သားလုပ်ငန်းအတွက် Solid Carbide နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော Planer ဓါးများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဓားပစ္စည်းတွေကို ဒီနှစ်ပြပွဲမှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်သွားမှာပါ။ပြပွဲသည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဖောက်သည်ဟောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံရန်သာမက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း သစ်အချောထည် လုပ်ငန်းမှ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ ဆက်သွယ် သင်ယူနိုင်သည့် အဖိုးတန် အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်ခန်းနံပါတ်- 3D18 တွင် သင့်ကိုစောင့်နေပါသည်။သင်၏လာရောက်လည်ပတ်မှုကို ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် စောင့်မျှော်နေပါသည်။